1 Ahene 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ahene Nhoma a Edi Kan 22:1-53
Yehosafat ne Ahab kaa wɔn ti boom (1-12)
Mikaia hyɛɛ nkɔm sɛ wobedi nkogu (13-28)
Atoro honhom bi na ɛdaadaa Ahab (21, 22)
Wokum Ahab wɔ Ramot-Gilead (29-40)
Yuda hene Yehosafat ahenni (41-50)
Israel hene Ahasia ahenni (51-53)
22 Siria ne Israel anko mfe abiɛsa. 2 Afe a ɛto so abiɛsa mu no, Yuda hene Yehosafat+ kɔɔ Israel hene nkyɛn.+ 3 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Munnim sɛ Ramot-Gilead+ yɛ yɛn dea, ɛnna yɛte hɔ a yenkogye mfii Siria hene nsam yi?” 4 Afei obisaa Yehosafat sɛ: “Wo ne me bɛkɔ Ramot-Gilead so ne wɔn akɔko anaa?” Ɛnna Yehosafat ka kyerɛɛ Israel hene sɛ: “Me ne wo nyinaa yɛ nipa baako. Me man ne wo man nso yɛ baako. M’apɔnkɔ ne w’apɔnkɔ yɛ baako.”+ 5 Nanso Yehosafat ka kyerɛɛ Israel hene sɛ: “Mesrɛ wo, bisa+ Yehowa anom asɛm ansa.”+ 6 Ɛnna Israel hene boaboaa adiyifo mmarima 400 ano, na obisaa wɔn sɛ: “Me ne Ramot-Gilead nkɔko anaa minnyae?” Na wɔkae sɛ: “Kɔ, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.” 7 Ɛnna Yehosafat bisae sɛ: “Yehowa diyifo biara nni ha anaa? Yɛmma ɔno nso mmisa mma yɛn.”+ 8 Na Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ɔbaako da so wɔ hɔ a yebetumi ama ɔno nso abisa Yehowa anom asɛm ama yɛn,+ nanso mempɛ n’asɛm koraa+ efisɛ ɔnhyɛɛ me ho nkɔm pa biara da; me ho nkɔm bɔne nko ara na ɔhyɛ.+ Ɔno ne Yimla ba Mikaia.” Nanso Yehosafat ka kyerɛɛ no sɛ: “Mma ɔhene nnka saa.” 9 Enti Israel hene frɛɛ ahemfi mpanyimfo no baako, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ ntɛm frɛ Yimla ba Mikaia brɛ me.”+ 10 Saa bere no, na Israel hene ne Yuda hene Yehosafat tete wɔn nhengua so hyehyɛ wɔn ahentaade wɔ Samaria kurow pon ano awiporowbea hɔ, na adiyifo no nyinaa gyinagyina wɔn anim rehyɛ nkɔm.+ 11 Na Kenaana ba Sedekia de dade yɛɛ mmɛn, na ɔkae sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Eyi na wode bɛpempem* Siriafo no de akosi sɛ wobɛtɔre wɔn ase.’” 12 Adiyifo nkae no nyinaa nso hyehyɛɛ nkɔm koro no ara sɛ: “Kɔ Ramot-Gilead so, na wubedi nkonim; Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.” 13 Na nea wɔsomaa no sɛ ɔnkɔfrɛ Mikaia mmra no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Adiyifo no nyinaa aka asɛmpa akyerɛ ɔhene, enti mesrɛ wo, ma w’asɛm nyɛ sɛ wɔn de no, na ka asɛmpa.”+ 14 Nanso Mikaia kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi, nea Yehowa bɛka no, ɛno ara na me nso mɛka.” 15 Bere a obeduu ɔhene anim no, ɔhene bisaa no sɛ: “Mikaia, yɛne Ramot-Gilead nkɔko anaa yennyae?” Ɛhɔ ara na obuaa ɔhene sɛ: “Monkɔ na mubedi nkonim, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.” 16 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Mpɛn ahe na wopɛ sɛ mema woka ntam sɛ nokware nkutoo na wobɛka wɔ Yehowa din mu akyerɛ me?” 17 Ɛnna afei ɔkae sɛ: “Hwɛ, mihu Israel sɛ wɔn nyinaa ahwete wɔ mmepɔw no so+ sɛ nguan a wonni hwɛfo. Yehowa se: ‘Eyinom nni wura. Enti ma obiara nsan nkɔ ne fi asomdwoe mu.’” 18 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ɛnyɛ asɛm a mekae no na ɛda hɔ yi, sɛ ‘ɔrenhyɛ me ho nkɔm pa, na mmom nkɔm bɔne’?”+ 19 Ɛnna Mikaia kae sɛ: “Afei tie Yehowa anom asɛm: Mihuu Yehowa sɛ ɔte n’ahengua so+ a ɔsoro asafodɔm nyinaa gyinagyina ne nifa ne ne benkum.+ 20 Na Yehowa bisae sɛ, ‘Hena na ɔbɛkɔ akɔdaadaa Ahab ma wakodi nkogu wɔ Ramot-Gilead?’ Afei oyi ka sɛɛ, na oyi nso aka sɛɛ. 21 Ɛnna honhom* bi+ begyinaa Yehowa anim kae sɛ: ‘Me na mɛkɔ akɔdaadaa no.’ Yehowa bisaa no sɛ, ‘Ɔkwan bɛn na wobɛfa so?’ 22 Ɔno nso buae sɛ, ‘Mɛkɔ akɔyɛ atoro honhom wɔ n’adiyifo nyinaa anom.’+ Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ, ‘Wubetumi adaadaa no ampa; nea worekɔyɛ no, ɛbɛyɛ yiye. Kɔ na kɔyɛ saa.’ 23 Enti hu sɛ Yehowa de atoro honhom na ahyɛ w’adiyifo yi nyinaa anom,+ nanso mmusu na Yehowa aka afa wo ho.”+ 24 Ɛnna Kenaana ba Sedekia twiw bɛn Mikaia, na ɔbɔɔ no sotɔre bisaa no sɛ: “Ɛhefa na Yehowa honhom nam twaa me ho ne wo bɛkasae?”+ 25 Mikaia buaa no sɛ: “Ɛda a wobɛhyɛn pia mu akohintaw no na wubehu baabi a ɛnam bae.” 26 Ɛnna Israel hene kae sɛ: “Momfa Mikaia nkɔma kurow sohwɛfo Amon ne ɔhene ba Yoas. 27 Monka nkyerɛ wɔn sɛ: ‘Nea ɔhene aka ni: “Momfa saa akoa yi nto afiase,+ na montew n’aduan* ne ne nsu so nkosi sɛ mɛsan aba asomdwoe mu.”’” 28 Ɛnna Mikaia kae sɛ: “Sɛ wosan ba asomdwoe mu paa a, ɛnde na ɛnyɛ Yehowa na ɔne me kasae.”+ Na ɔka kaa ho sɛ: “Mo nyinaa moate bi.” 29 Enti Israel hene ne Yuda hene Yehosafat kɔɔ Ramot-Gilead so.+ 30 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Mɛsakra me ho akɔ akono, nanso wo de, hyɛ w’ahentaade.” Enti Israel hene sakraa ne ho+ na ɔkɔɔ akono. 31 Ná Siria hene no ahyɛ ne nteaseɛnam so asahene 32+ no sɛ: “Mo ne akumaa anaa ɔkɛse nnko, momfa mo ani nsi Israel hene nko ara so.” 32 Na bere a nteaseɛnam so asahene no huu Yehosafat pɛ, wɔkae sɛ: “Ampa, Israel hene no ni.” Enti wɔkɔɔ no so sɛ wɔne no rekɔko. Ɛnna Yehosafat fii ase su hwehwɛɛ ogyefo. 33 Bere a nteaseɛnam so asahene no hui sɛ ɛnyɛ Israel hene no, ntɛm ara na wɔdan wɔn ho, na wɔanni n’akyi bio. 34 Na ɔbarima bi tow n’agyan, na ɛfom* kɔwɔɔ Israel hene wɔ ne dade ataade no mpamee so. Enti ɔhene no ka kyerɛɛ nea ɔreka teaseɛnam no sɛ: “Dan wo ho na fa me fi akono ha* kɔ, na wɔapira me pira bɔne.”+ 35 Ɔko no kɔɔ so da mu no nyinaa, na wosusoo ɔhene mu gyinaa teaseɛnam no mu de n’ani kyerɛɛ Siriafo no; mogya a ɛrenwini no no guu teaseɛnam no mu, na eduu anwummere no na wawu.+ 36 Bere a owia kɔtɔe no, wɔteɛɛm kae wɔ asoɛe hɔ nyinaa sɛ: “Obiara nkɔ ne kurow mu! Obiara nkɔ n’asaase so!”+ 37 Enti ɔhene no wui. Wɔde no baa Samaria, na wosiee ɔhene no wɔ Samaria. 38 Bere a wɔkɔhohoroo teaseɛnam no mu wɔ Samaria abura no ho no, nkraman bɛtaforoo ne mogya, na tuutuufo nso beguaree wɔ hɔ,* na ɛno maa asɛm a Yehowa kae no baa mu.+ 39 Ahab ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe nyinaa ne asonse*+ fi* a osii, ne nkurow a ɔkyekyee nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Israel ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu. 40 Na Ahab ne n’agyanom kɔdae,+ na ne ba Ahasia+ bedii n’ade. 41 Israel hene Ahab ahenni afe a ɛto so anan mu na Asa ba Yehosafat+ bedii Yuda so hene. 42 Yehosafat bedii ade no, na wadi mfe 35, na odii hene mfe 25 wɔ Yerusalem. Ne maame din de Asuba, na na ɔyɛ Silhi babea. 43 Nea ɔhene no papa Asa yɛe no,+ ɛno ara bi na ɔno nso yɛe, wamman amfi ho. Ɔyɛɛ nea ɛteɛ wɔ Yehowa ani so.+ Mmom sorɔnsorɔmmea* no de, ɛkaa hɔ. Ɔman no kɔɔ so bɔɔ afɔre na wɔhyew afɔrebɔde wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ.+ 44 Yehosafat ne Israel hene tenaa asomdwoe mu.+ 45 Yehosafat ho nsɛm a aka, ne nnwuma akɛse ne ako a odii no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Yuda ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu. 46 Tuutuufo mmarima+ a ne papa Asa bere so wɔkaa asɔrefi hɔ nso, otuu wɔn ase fii asaase no so.+ 47 Saa bere no, na ɔhene biara nni Edom;+ amrado na na odi hene.+ 48 Yehosafat yeyɛɛ Tarsis ahyɛn* a anka ɔde bɛkɔ Ofir akɔfa sika kɔkɔɔ,+ nanso antumi ankɔ efisɛ ahyɛn no sɛee wɔ Esion-Geber.+ 49 Ɛnna Ahab ba Ahasia ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ma me nkoa mmɛka wo nkoa ho wɔ ahyɛn no mu,” nanso Yehosafat ampene. 50 Na Yehosafat ne n’agyanom kɔdae,+ na wosiee no kaa n’agyanom ho wɔ ne nana Dawid Kurow mu, na ne ba Yehoram+ bedii n’ade. 51 Yuda hene Yehosafat ahenni afe a ɛto so 17 mu no, Ahab ba Ahasia+ bedii Israel so hene wɔ Samaria, na odii Israel so mfe abien. 52 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne, na nea ne papa+ ne ne maame yɛe no,+ ɛno bi na ɔyɛe; nea Nebat ba Yeroboam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no yɛe no, ɛno ara bi na ɔyɛe.+ 53 Ɔtoaa so som Baal,+ na ɔkotow no, na ɔkɔɔ so hyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw+ sɛnea ne papa yɛe no.
^ Anaa “bepiapia.”
^ Anaa “ɔbɔfo.”
^ Nt., “ne paanoo.”
^ Anaa “tow n’agyan a n’ani nna.”
^ Nt., “nsraban yi mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “baabi a tuutuufo guare no, ɛhɔ na nkraman bɛtaforoo ne mogya.”
1 Ahene 22